नेपालीसँग युद्द लड्न राजधानीमा अंग्रेज फौज! | Glamour Nepal
Home » फिल्मी न्युज / गसिप » फिल्मी समाचार » नेपालीसँग युद्द लड्न राजधानीमा अंग्रेज फौज!
नेपालीसँग युद्द लड्न राजधानीमा अंग्रेज फौज!
ऐतिहासिक नेपाली चलचित्र ‘नालापानी’को राजधानीका विभिन्न स्थानहरुमा छायांकन भईरहेको छ। गत साता नारायणहिटी दरबार संग्राहलयमा रहेको नेपाल आर्मीको गोरख गणको मैदानमा भव्य रुपमा छायांकन गरिएको थियो। छायांकनमा नेपालीसँग युद्द लड्न अंग्रेज फौज आउँदै गरेको दृश्य थिए। नेपाल आर्मीबाट प्राप्त झण्डै पचास वटा घोडा र करिब ३ सय हतियार सहितका फौज मैदानमा उतारिएको थियो जसलाई भिएफएक्सको माध्यमबाट हजारौँको संख्या देखाईने निर्देशक रिमेश अधिकारीले बताए।
उक्त दृश्य छायांकनमा पाँच वटा क्यामेरा प्रयोग गरिएको थियो। भिएफएक्सको अधिक प्रयोग हुने यस चलचित्रका सम्पूर्ण दृश्य छायांकनमा चलचित्रका सम्पादन टीम तथा भिएफएक्स टीम सँगै रहेर काम गरिरहेका छन्।
निर्देशक अधिकारीले नेपाल आर्मीको सहयोग र साथ बीना यस्तो प्रकारले चलचित्र छायांकन सम्भव नभएको बताए। ‘नेपाल आर्मीले हामीलाई दिएको सहयोगप्रती कृतज्ञ छौँ। सम्भवत नेपालमा कुनै पनि चलचित्र यस प्रकारले छायांकन गरिएको थिएन, यो सबै नेपाल आर्मीकै देन हो’। चलचित्रका निर्माता मनोज शाक्यले नेपालीको विर गाथासँग जोडिएको चलचित्रलाई नेपाल आर्मीले साथ दिएकोमा खुशी व्यक्त गरे।
काठमाण्डौ र आसपासमा छायांकन सकिएपछि चलचित्र यूनिट उपरदाङ्ग गढी पुग्ने बताईएको छ। निर्देशक अधिकारीका अनुसार चलचित्रको छायांकन करिव तीन महिना सम्म लगातार चल्नेछ।
हाल भारतमा अवस्थित देहरादुनको नालापानीमा सन् १८१४ मा नेपालले ब्रिटिश साम्राज्यविरुद्द नेपालले युद्द लडेको थियो। आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्दै भारतसम्म आइपुगेको तत्कालिन ब्रिटिश इष्ट इन्डिया कम्पनीले नेपालमा आफ्नो अधिपत्य कायम गर्न अघि बढेको समयमा त्यसलाई रोक्न नेपालले युद्द लड्नुपरेको थियो। त्यो समयमा नेपालमा पर्ने नालापानी आइपुगेको अंग्रेज सेनासँग नेपाली सेनाको मुठभेड भयो। तत्कालिन वीर गोरखाली सेना कप्तान बलभद्र कुँवरको नेतृत्वमा नेपालले अंग्रेजसँग बहादुरीपूर्वक लडाइँ लडेको थियो।
यसै बिषयमा आधारित रहेर प्राचार्य रामराजा कुँवर र प्रा. डा.धन बहादुर कुँवरले लेखेको ऐतिहासिक पुस्तक ‘वीर बलभद्र कुँवर’मा आधारित ‘नालापानी’ बनिरहेको छ। यो चलचित्रको बजेट झण्डै ९ करोड रहेको छ। ‘नालापानी’मा देव गुरुङ्ग, देशभक्त खनाल, अर्जुनजंग शाही, मनोज शाक्य, बिशाल पहारी, बिजय बिष्फोट, पुजना प्रधान, ईशान बिजु श्रेष्ठ, हिक्मत थपलिया, जनक बर्तौला, विशाल श्रेष्ठ, गीता अधिकारी, गीता बिष्ट लगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहनेछ।
पद्मा कुमारी फिल्मस प्राली र गंगानारायण फिल्मस प्रालीको संयुक्त ब्यानरमा बन्ने यस चलचित्रमा मजोन शाक्य र नितिशा शाक्य निर्माताको रुपमा रहेका छन्। चलचित्रको लेखन रिमेश अधिकारी र कृष्ण आचार्यले गरेका हुन्। रोशन श्रेष्ठ चलचित्रका द्वन्द्व निर्देशक हुन्। बिपिन मल्लले सम्पादन तथा अच्युत गजुरेलले भिएफएक्स गर्ने यस चलचित्रलाई रामशरण उप्रेतीले छायांकन गरिरहेका छन्।
नायिका पुजना प्रधानको चकलेट फोटो सेसन – हेर्नुहोस् फोटो ग्यालरी
दर्शक स्रोताले रुचाउदै छन् निर्मल शर्मा निर्देशित पुजना प्रधानको चकलेटको गीत
पुजना भन्छिन “कथा प्रति न्याय हुन्छ भने न्युड दृश्य दिन पनि तयार छु!”
फेसबुकमा पोखिएको कलाकारको प्रेम
पुजनालाई नौ बच्चाको भर